ကင်ဆာထိတောင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ လေးဖက်နာတွေအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ လက်ပံပွင့်”…. - TheeSayChin
ကင်ဆာထိတောင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ လေးဖက်နာတွေအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ လက်ပံပွင့်”….
ကငဆြာ ပွောကကြငြးနိုငပြှီး ဆီးခွို၊ သှေးတိုး၊ မီးယပရြောဂါနဲ့ လေးဖကနြာတှအတှေကြ အစှမြးထကတြဲ့ လကပြံပှငြ့
အ ညာေ ဒ သ မွားမှာပေါကလြွှကသြော”လကပြံပှငြ’အမွာပေါကလြေ့ရှိကှပါတယြ။
အညာဒသအေေ ခါ အဝေါအမွိုးမွိုရှိကှပါတယြ။ကရငပြှညနြယဒြသမွေားတှငြ”လကပြံပှငြ’အနညြးအမွားအလိုကပြေါကလြေ့ရှိကှပါတယြ။
ကမွတို့ ကရငပြှညနြယြ ကောကရိတမြှိုနယကြွုံဒိုးမှို့ အမှတြ( ၄ ) ရပကြှကြ အဘိုအဘှားခတြကေဆိုရငြ ကွှနြးကလေးမွားမှာ လကပြံပှငအြမွားအပှားကမွတို့အဘို အဘှား လကထြကကြတညြးက ရှိကှပါတယြ။
ယခုကမွတို့လကထြဲမှာ” လကပြံပှငြ” တဈပငတြညြး ပဲရှိပါတောတယြ။လကပြံပှငြ’”ဆေး ဖကြ ဝငြ တယဆြိုတာ တောရုံတနရြုံဘယသြူကမွားမသိကှပါဘူး။ တခွို့ဒသမွေားစားလေ့ရှိကှပါတယြ။
ဆေး ဖကြ ဝငမြှနလြညမြသိကှပါဘူး။တဈခွို့ဒသမွေားလညြ” လကပြံပှငြ”ကိုစားရမှနမြသိကှပါဘူး။ထိုငြး နိုငြး ငံေ ရှကွောငြ/ ငှကွေောငြးနာမှာဆိုရငြ” လကပြံပှငြ” ထိုငြးလူမွိုးမွားကစာ့လေ့မရှိကှပါဘူး။ စားလညမြစားကှပါဘူ။
ကွ မ တို့မငြျဂလာဆောငပြှီးထိုငြးနိုငငြံအလညအြပတသြှားကှပါတယြ။ကမွတို့ရှကွေောငြးဘုရားသှားဖူကှပါတယြ။ငှကွေောငြးဘုရားသှားဖူးကှပါတယြ
။ငှကွေောငြးဘုရားသှားဖူတော” လကပြံပှငြ’”အပငကြှီးကှီးကို ထိုငြးလူမွိုးကဆိုရငြ” လကပြံပှငြ”ကောကပြှီးအမှိုကပြုံထဲထညကြှပါတယြ။
ငှကွေောငြးဘုရားသနရြှငရြအဖှေဲ့ခေါငဆြောငြးကိုကမွမေးကှညလြိုကပြါတယြ။ ထိုငြးဘာသာစကားဖှငြ့မေးကှညပြါတယြ။အ နိ ထနြ မလိုငြ မေးကှညတြော ထိုငြးနိုငငြံသနြ့ရှငြးရအဖှေဲ့ကကငမြိတဒြိုငြ ( စာလိုမရဘူးတယဟြု ) ထိုငြးဘာသာဖှငပြှနပြှောပါတယြ။
ကွ မှေ ပာပှပါ တယြ။ကငဒြိုငြ= စားလိုရတယြ…..ထိုငြး နိုငငြံသာတှကပှေုံးကှပါတယြ။သူတို့ အံ့သှကှပါတယြ။စားလို့ရလို့ ဆိုတော သူတိုအံ့သှကှလို ကမွအတှကကြတော လကပြံပှငြ့ဟာ ဆေး….။
အဲဒီေ ဆး အကှောငြး ဆကပြှောပှမယနြောြ…..ကမွတို့အဘိုအဘှားလကထြကကြဆေးဖကဝြငတြဲ့ လကပြံပှငြ့ လကပြံပှငြ့ ဆေးဖကဝြငပြုံ….
( က ) ဆးီခွိုးရောဂါသမားအတှကြ လကပြံပှငြ့ကိုပှုတစြားပါ။လကပြံပှငကြိုဟငြးခွိုခကွစြားပါ။
( ခ ) သှေးတိုးရောဂါသမားအတှကြ ဇီသီးနဲလကပြံပှငရြောပှီးဟငြးခွိုခကွစြားပါ။
( ဂ ) မီးယပ ရြောဂါသမားအတှကြ လကပြံအခေါကပြှုတပြှီးသောကပြါ။
( ဃ ) လေးဖကနြားသမားအတှကလြကပြံပငအြမှဈကိုသှေးပှီးသောကပြါ။ပှီးလွှငခြှဆဈေ လကဆြဈကို လိမြးပေးပါ။လေးဖကနြားရောဂါ( ၃ ) မွိုးရှိကှပါတယြ။
နံ ပါတြ( ၁) ပိုးလေးဖကနြား
နံပါတြ( ၂ ) သှေးလေးဖကနြား
နံပါတြ( ၃ )အရပှောလေးဖကနြာ လေးဖကနြာအမွိုးအစားသုံးမွိုးရှိကှပါတယြ။
လေးဖကနြားရောဂါရှိပှီဆိုရငြ လကပြံပှငြ့အမှဈကိုကွောကပြဉွနြဲသှေးပှီးဆားအနညြးငယထြည့ ပြှီးသောကပြါ။ လေးဖကနြာပိုးတှအေားလုံးသစမေညြေ။
နံပါတြ( ၄ ) ရငသြာကငဆြားဆေးနညြး…..
ရငသြာကငဆြား( ၃ ) မွိုး
အဆငြ့( ၁ ) ရငသြာကငဆြာ ပထမအဆငြ့ကတော့ လကပြံပှငအြရှကကြိုခှှလေိုကပြါ။
လကပြံပှငြ အလှာပှငလြေးကို ဇှနြးနဲံ့ခှဈယူပှီး သကှားနဲဖွောပြှီးသောကပြါ။အရသား ခွှဲပစွပြစွကြလေးနဲ့ ခဉွပြှုံးလေးနဲပါ။
အဆငြ့( ၂ ) လကပြံပှငြ့ အခေါကကြိုကွောကပြဉွနြဲ့သှေးပါ။ရငသြားတဈဝိုကထြူထူလိမြးပေးပါ။ရငသြာနာခှငြး အလုံးတညခြှငြးလွော့နညြး စပှေီး ပဂတိအတိုငြး သကသြာပွောကကြငြးပ့ါတယြ။
အဆငြ( ၃ ) လကပြံပှငအြခေါကကြိုသှေးလိမြးပါ။ သေးှပှီးသောကပြါ။ ရငသြာတဈဝိုကြ လိမြးပေးပါ။
ရငသြာကငဆြာကုလိုမရတဲ့ အထိဖှဈသှားပှီဆိုရငြ မနကတြဈကှိမြ နေ့လညတြဈကှိမညြနတဈေကှိမြ ( ၃ ) လတိတိပွောကကြငြးပါသညြ။
ကငွ ဆာ ထိေ တာငွ ပှောကကွငွးနိုငပွှီး ဆီးခှို၊ သှေးတိုး၊ မီးယပရွောဂါနဲ့ လေးဖကနွာတှအတှကွေ အစှမွးထကတွဲ့ လကပွံပှင့ွ
အ ညာေ ဒ သ မှားမှာပေါကလွှှကသွော”လကပွံပှငွ’အမှာပေါကလွေ့ရှိကှပါတယွ။ အညာဒသအေေ ခါ အဝေါအမှိုးမှိုရှိကှပါတယွ။ကရငပွှညနွယဒွသမှေားတှငွ”လကပွံပှငွ’အနညွးအမှားအလိုကပွေါကလွေ့ရှိကှပါတယွ။
ဆေး ဖကွ ဝငမွှနလွညမွသိကှပါဘူး။တဈခှို့ဒသမှေားလညွ” လကပွံပှငွ”ကိုစားရမှနမွသိကှပါဘူး။ထိုငွး နိုငွး ငံေ ရှကှောငွ/ ငှကှေောငွးနာမှာဆိုရငွ” လကပွံပှငွ” ထိုငွးလူမှိုးမှားကစာ့လေ့မရှိကှပါဘူး။ စားလညမွစားကှပါဘူ။
ကွ မ တို့မငြျဂလာဆောငပြှီးထိုငြးနိုငငြံအလညအြပတသြှားကှပါတယြ။ကမွတို့ရှကွေောငြးဘုရားသှားဖူကှပါတယြ။ငှကွေောငြးဘုရားသှားဖူးကှပါတယြ။ငှကွေောငြးဘုရားသှားဖူတော” လကပြံပှငြ’”အပငကြှီးကှီးကို ထိုငြးလူမွိုးကဆိုရငြ” လကပြံပှငြ”ကောကပြှီးအမှိုကပြုံထဲထညကြှပါတယြ။
ကွ မှေ ပာပှပါ တယြ။ကငဒြိုငြ= စားလိုရတယြ…..ထိုငြး နိုငငြံသာတှကပှေုံးကှပါတယြ။သူတို့ အံ့သှကှပါတယြ။စားလို့ရလို့ ဆိုတော သူတိုအံ့သှကှလို ကမွအတှကကြတော လကပြံပှငြ့ဟာ ဆေး
အဲဒီေ ဆး အကှောငွး ဆကပွှောပှမယနွောွ…..ကမှတို့အဘိုအဘှားလကထွကကွဆေးဖကဝွငတွဲ့ လကပွံပှင့ွ လကပွံပှင့ွ ဆေးဖကဝွငပွုံ
( က ) ဆးီခှိုးရောဂါသမားအတှကွ လကပွံပှင့ကွိုပှုတစွားပါ။လကပွံပှငကွိုဟငွးခှိုခကှစွားပါ။
( ဃ ) လေးဖကနြားသမားအတှကြ
လကပြံပငအြမှဈကိုသှေးပှီးသောကပြါ။ပှီးလွှငခြှဆဈေ လကဆြဈကို လိမြးပေးပါ။လေးဖကနြားရောဂါ( ၃ ) မွိုးရှိကှပါတယြ။
အဆငြ့( ၁ ) ရငသြာကငဆြာ ပထမအဆငြ့ကတော့ လကပြံပှငအြရှကကြိုခှှလေိုကပြါ။ လကပြံပှငြ အလှာပှငလြေးကို ဇှနြးနဲံ့ခှဈယူပှီး သကှားနဲဖွောပြှီးသောကပြါ။အရသား ခွှဲပစွပြစွကြလေးနဲ့ ခဉွပြှုံးလေးနဲပါ။
အဆငြ( ၃ ) လကပြံပှငအြခေါကကြိုသှေးလိမြးပါ။ သေးှပှီးသောကပြါ။ ရငသြာတဈဝိုကြ လိမြးပေးပါ။ရငသြာကငဆြာကုလိုမရတဲ့ အထိဖှဈသှားပှီဆိုရငြ မနကတြဈကှိမြ နေ့လညတြဈကှိမညြနတဈေကှိမြ ( ၃ ) လတိတိပွောကကြငြးပါသညြ။
Unicode Font ဖှငြ့ဖတရြနြ
အ ညာေ ဒ သ မှားမှာပေါကလွှှကသွော”လကပွံပှငွ’အမှာပေါကလွေ့ရှိကှပါတယွ။
အဲဒီေ ဆး အကှောငွး ဆကပွှောပှမယနွောွ…..ကမှတို့အဘိုအဘှားလကထွကကွဆေးဖကဝွငတွဲ့ လကပွံပှင့ွ လကပွံပှင့ွ ဆေးဖကဝွငပွုံ….
ကငှ ဆာ ထိေ တာငှ ပှောကကှငှးနိုငပှှီး ဆီးခှို၊ သှေးတိုး၊ မီးယပရှောဂါနဲ့ လေးဖကနှာတှအတှကှေ အစှမှးထကတှဲ့ လကပှံပှင့ှ
အ ညာေ ဒ သ မှားမှာပေါကလှှှကသှော”လကပှံပှငှ’အမှာပေါကလှေ့ရှိကှပါတယှ။ အညာဒသအေေ ခါ အဝေါအမှိုးမှိုရှိကှပါတယှ။ကရငပှှညနှယဒှသမှေားတှငှ”လကပှံပှငှ’အနညှးအမှားအလိုကပှေါကလှေ့ရှိကှပါတယှ။
ကမှတို့ ကရငပွှညနွယွ ကောကရိတမွှိုနယကွှုံဒိုးမှို့ အမှတွ( ၄ ) ရပကွှကွ အဘိုအဘှားခတွကဆေိုရငွ ကှှနွးကလေးမှားမှာ လကပွံပှငအွမှားအပှားကမှတို့အဘို အဘှား လကထွကကွတညွးက ရှိကှပါတယွ။
ယခုကမှတို့လကထွဲမှာ” လကပွံပှငွ” တဈပငတွညွး ပဲရှိပါတောတယွ။လကပွံပှငွ’”ဆေး ဖကွ ဝငွ တယဆွိုတာ တောရုံတနရွုံဘယသွူကမှားမသိကှပါဘူး။ တခှို့ဒသမှေားစားလေ့ရှိကှပါတယွ။
ဆေး ဖကှ ဝငမှှနလှညမှသိကှပါဘူး။တဈခှို့ဒသမှေားလညှ” လကပှံပှငှ”ကိုစားရမှနမှသိကှပါဘူး။ထိုငှး နိုငှး ငံေ ရှကှောငှ/ ငှကှေောငှးနာမှာဆိုရငှ” လကပှံပှငှ” ထိုငှးလူမှိုးမှားကစာ့လေ့မရှိကှပါဘူး။ စားလညမှစားကှပါဘူ။
ကှ မ တို့မငွဂြလာဆောငပွှီးထိုငွးနိုငငွံအလညအွပတသွှားကှပါတယွ။ကမှတို့ရှကှေောငွးဘုရားသှားဖူကှပါတယွ။ငှကှေောငွးဘုရားသှားဖူးကှပါတယွ။ငှကှေောငွးဘုရားသှားဖူတော” လကပွံပှငွ’”အပငကွှီးကှီးကို ထိုငွးလူမှိုးကဆိုရငွ” လကပွံပှငွ”ကောကပွှီးအမှိုကပွုံထဲထညကွှပါတယွ။
ငှကှေောငှးဘုရားသနရှှငရှအဖှေဲ့ခေါငဆှောငှးကိုကမှမေးကှညလှိုကပှါတယှ။ ထိုငှးဘာသာစကားဖှင့မှေးကှညပှါတယှ။အ နိ ထနှ မလိုငှ မေးကှညတှော ထိုငှးနိုငငှံသန့ရှှငှးရအဖှေဲ့ကကငမှိတဒှိုငှ ( စာလိုမရဘူးတယဟှု ) ထိုငှးဘာသာဖှငပှှနပှှောပါတယှ။
ကှ မှေ ပာပှပါ တယှ။ကငဒှိုငှ= စားလိုရတယှ…..ထိုငှး နိုငငှံသာတှကပှေုံးကှပါတယှ။သူတို့ အံ့သှကှပါတယှ။စားလို့ရလို့ ဆိုတော သူတိုအံ့သှကှလို ကမှအတှကကှတော လကပှံပှင့ဟှာ ဆေး
အဲဒီေ ဆး အကှောငှး ဆကပှှောပှမယနှောှ…..ကမှတို့အဘိုအဘှားလကထှကကှဆေးဖကဝှငတှဲ့ လကပှံပှင့ှ လကပှံပှင့ှ ဆေးဖကဝှငပှုံ
( က ) ဆးီခှိုးရောဂါသမားအတှကှ လကပှံပှင့ကှိုပှုတစှားပါ။လကပှံပှငကှိုဟငှးခှိုခကှစှားပါ။
( ခ ) သှေးတိုးရောဂါသမားအတှကှ ဇီသီးနဲလကပှံပှငရှောပှီးဟငှးခှိုခကှစှားပါ။
( ဂ ) မီးယပ ရှောဂါသမားအတှကှ လကပှံအခေါကပှှုတပှှီးသောကပှါ။
( ဃ ) လေးဖကနွားသမားအတှကွ
လကပွံပငအွမှဈကိုသှေးပှီးသောကပွါ။ပှီးလှှငခွှဆဈေ လကဆွဈကို လိမွးပေးပါ။လေးဖကနွားရောဂါ( ၃ ) မှိုးရှိကှပါတယွ။
နံ ပါတွ( ၁) ပိုးလေးဖကနွား
နံပါတွ( ၂ ) သှေးလေးဖကနွား
နံပါတွ( ၃ )အရပှောလေးဖကနွာ လေးဖကနွာအမှိုးအစားသုံးမှိုးရှိကှပါတယွ။
လေးဖကနှားရောဂါရှိပှီဆိုရငှ လကပှံပှင့အှမှဈကိုကှောကပှဉှနှဲသှေးပှီးဆားအနညှးငယထှည့ ပှှီးသောကပှါ။ လေးဖကနှာပိုးတှအေားလုံးသစမညှေေ။
နံပါတွ( ၄ ) ရငသွာကငဆွားဆေးနညွး…..
ရငသွာကငဆွား( ၃ ) မှိုး
အဆင့ှ( ၁ ) ရငသှာကငဆှာ ပထမအဆင့ကှတော့ လကပှံပှငအှရှကကှိုခှှလေိုကပှါ။ လကပှံပှငှ အလှာပှငလှေးကို ဇှနှးနဲံ့ခှဈယူပှီး သကှားနဲဖှောပှှီးသောကပှါ။အရသား ခှှဲပစှပှစှကှလေးနဲ့ ခဉှပှှုံးလေးနဲပါ။
အဆင့ှ( ၂ ) လကပှံပှင့ှ အခေါကကှိုကှောကပှဉှနှဲ့သှေးပါ။ရငသှားတဈဝိုကထှူထူလိမှးပေးပါ။ရငသှာနာခှငှး အလုံးတညခှှငှးလှော့နညှး စပှေီး ပဂတိအတိုငှး သကသှာပှောကကှငှးပ့ါတယှ။
အဆငွ( ၃ ) လကပွံပှငအွခေါကကွိုသှေးလိမွးပါ။ သေးှပှီးသောကပွါ။ ရငသွာတဈဝိုကွ လိမွးပေးပါ။ရငသွာကငဆွာကုလိုမရတဲ့ အထိဖှဈသှားပှီဆိုရငွ မနကတွဈကှိမွ နေ့လညတွဈကှိမညွနတဈကှေိမွ ( ၃ ) လတိတိပှောကကွငွးပါသညွ။
”ဘဝမှာအခက်အခဲ တခုခုကြုံလာရင်တနေ့ ”(၉)ပတ်စိပ်ပြီး (၉)ရက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်” ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ”…….
ခွဲစိတ်ကုသရင် (၁၀) သိန်းနဲ့အထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို တစ်ပြား၊ တစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသွားဆေးတဲ့ ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
LOCAL NEWS ကျန်းမာရေး
” ရောဂါမျိုးစုံ ၂ ခါလောက်ပြတာနဲ့ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ ”တိုက်ကြီးမြို့နယ် စာဖြူစုရွာက ဆေးဆရာ”…..
Life Style ကျန်းမာရေး
မျက်နှာအသားအရည်လေးတင်းရင်းလှပစေဖို့အတွက် သဘာဝအတိုင်းမျက်နှာပေါင်းတင်နည်း ၃ မျိုး